Izindaba - Amaseli Wezokwelapha Ase-Foton AUV Afike eSyria Okwenziwayo
Amaseli we-Foton AUV Mobile Medical Amaseli Afike eSyria Okwenziwayo
Izikhulu ezivela eChina naseSyria bezihambele lo mcimbi wokunikezelwa kwalezi zinhlelo
Njengeqoqo lokuqala lezinsiza ezisuka eChina Red Cross ziye eSyria, amaseli ezokwelapha akwa-Foton AUV nama-ambulensi akhombisa ngokugcwele ukuzibophezela kwenkampani ekuthwaleni izibopho zomphakathi eziningi nokunikeza uthando nokunakekela labo bantu abadinga usizo.
Ngemuva komcimbi wokunikezela, uWang Qinglei, unjiniyela wezobuchwepheshe ovela e-Foton AUV uthole ukunconywa ngokuletha isifundo esihle ngokusetshenziswa nokunakekelwa kwamaseli ezokwelapha angomahamba nendlwana nama-ambulensi kubasebenzi abavela eSyria Arab Red Crescent (SARC).
UWang Qinglei ukhombise ukuthi zisebenza kanjani i-Foton AUV Medical Care Cell
Kusukela ngo-2008 kuya ku-2012, i-Foton AUV inikele ngamaseli ezokwelapha angomahamba nendlwana ezindaweni ezithile ezikhungethwe ubuphofu eXinjiang, Qinghai nase-Inner Mongolia, okwenze kwaba lula kakhulu kubantu bendawo ukuthola ukwelashwa. IFoton AUV ngomzamo wayo yenza iminikelo emikhulu ngisho nangaphezulu ekuthuleni nasekuthuthukeni komhlaba.
Amalungu akwaSARC athathe i-selfie phambi kwe-Foton AUV Mobile Medical Cell